» संसारलाइ पछी पार्दै विश्वमै राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली प्रकृति कम्प्युटरलाई च्यालेन्ज पत्रकार नै चकित (हेर्नुस् भिडियो सहित ) सम्मान को लागि एक सेयर गर्नुस् संसारलाइ पछी पार्दै विश्वमै राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली प्रकृति कम्प्युटरलाई च्यालेन्ज पत्रकार नै चकित (हेर्नुस् भिडियो सहित ) सम्मान को लागि एक सेयर गर्नुस् – हाम्रो खबर
संसारलाइ पछी पार्दै विश्वमै राम्रो अक्षर लेख्ने नेपाली प्रकृति कम्प्युटरलाई च्यालेन्ज पत्रकार नै चकित (हेर्नुस् भिडियो सहित ) सम्मान को लागि एक सेयर गर्नुस्
नौ वर्षमै प्रकृति मल्ल कक्षा ५ मा पढ्थिन्, त्यही कक्षामा छँदा मल्लको हातमा एउटा कापी पर्यो ! आफू पढ्ने विद्यालयकै माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु, अभिषेक लोप्चनको । कक्षाका अरु विद्यार्थीको तुलनामा छोरीको पनि हस्तलेखन अब्बल भएकोले बुवा प्रल्हादकुमारले लोप्चनको कापी प्रकृतिलाई देखाउनकै लागि घरमा ल्याएका थिए । ‘कापी हातमा पर्ने बित्तिक्कै म त एकछिन केही बोल्नै सकिन ।’
तीन वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झँदै १२ वर्षीया मल्लले भनिन्, ‘मैले कापी ओल्टाइपल्टाइ गरेँ, यस्तो अनविलिएवल (अविश्सनीय) अक्षर पनि लेख्न सकिने रहेछ भन्ने लाग्यो ।’ त्यही ‘अनविलियवल’ अक्षर देखेर निक्कै उत्साहित भइन् उनी ।
कुनै टाइपिष्टले टाइप गरेको जस्तो, एकनासे अक्षरका दानाहरु, कुनै केरमेट नगरीएको सफा, हेर्दैमा चित्ताकर्षक, लोभलाग्दो अक्षर ! भ्यालीवाइड इन्टर स्कुल ह्याण्डराइटिङ कण्टेष्टमा उत्कृष्ट भएपछि उनको ह्याण्डराइटिङ सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बन्यो । फेसबुक र ट्विटरमा छ्याप्छ्याप्ति भएको त्यो ह्याण्डराइटिङ हजारौंको संख्यामा शेयर भएको छ, लाखौं लाईक, कमेण्ट र ट्विट भएका छन् । उनको अक्षर देखेर सामाजिक सञ्जालमा कमेण्टहरु ‘छक्क’ परेका छन् । ‘वाह !’ भनेका धेरैको अर्को पनि प्रतिक्रिया छ, ‘गड गिफ्टेड ह्याण्डराइटिङ !
कसरी सम्भव भयो ? आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी अर्थात् दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुँदै गएपछि उनीप्रति धेरै शिक्षकहरुको ध्यान गयो । शिक्षकहरुले कक्षामै र स्कुलमै प्रकृतिको ह्याण्डराइटिङको खुलेरै प्रशंसा गर्न थाले । ‘कापी देख्ने बित्तिक्कै मैले पनि त्यो कापीको भन्दा राम्रो ह्याण्डराइटिङ लेख्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर नियमित अभ्यास गरेँ । अक्षर कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएँ ।
दिनकै म एकदुई पेज त ह्यान्डराइटिङ लेख्नतिर नै समय दिएँ ।’ उनले सफलताको रहस्य बताइन् । ‘मुख्य कुरा अभ्यास नै हो, अभ्यासले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउँछ ।’ अक्षर राम्रो बनाउन भित्रैदेखि लागेका उनलाई राम्रो ह्याण्डराइटिङ लेख्नु पनि एक प्रकारको सीप र कला हो भन्ने लाग्यो हो । त्यही कारण उनले राम्रा ह्याण्डराइटिङका नमूनाहरु संकलन गरिन् । राम्रो अक्षर कसरी लेखिँदो रहेछ भनेर अक्षरमै घोत्लिइन् । ‘इन्टरनेटमा कुन अक्षरको सेप कस्तो ? हुने रहेछ भनेर आफै पनि खोज्न थालेँ ’ उनले भनिन्, ‘सँधै रुटिनै बनाएर ह्याण्डराइटिङ गरेँ ।